musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » misangano » IMEX America Launch: Nyowani Simba uye Solidarity
Uye isu taenda - Zuva rekutanga IMEX America.
Nharaunda yezviitiko zvebhizinesi repasi rose yakaratidza simba muhuwandu, ichiungana paIMEX America, iyo yakavhurwa nhasi muLas Vegas. Vatengi vepasirese vanopfuura zviuru zvitatu nemazana matatu nemakambani anodarika zviuru zviviri nemazana maviri nemazana maviri nemazana maviri nemazana maviri nemazana mashanu akanyoreswa kuti vauye kushoo iyi, inoitika Mbudzi 3,300 - 2,250 kuMandalay Bay, uye vakagadzirirwa kugadzira nzira yekumutsiridza indasitiri iyi.
IMEX America chiitiko chakakosha kuindasitiri yemisangano kuve chiitiko chekutanga chepasi rose kuvhurwa mushure mekubviswa kwechirambidzo chekufamba muUS.
Chiitiko chegore rino chinocherekedza makore gumi emitambo yakabudirira uye ndeyekutanga mumakore anopfuura maviri kubva denda.
Chiitiko ichi chinoitika mumusha wavo mutsva kuMandalay Bay muLas Vegas, Nevada, kutanga nhasi kusvika Mbudzi 11.
Gore rino IMEX Amerchando, shoo yekutanga mumakore maviri, chiitiko chakakosha kuchikamu ichi sechiitiko chekutanga chepasi rose kuvhurwa mushure mekubviswa kwechirambidzo chekufamba muUS. Iyo showo inewo imba nyowani, Mandalay Bay, uye iri kupemberera kuburitswa kwayo kwegumi, zvichiita kuti mazuva mashoma anotevera muLas Vegas ave chiitiko chakakosha.
Kuita bhizinesi kunogara pakati pechiratidziro uye gore rino hakuna mutsauko nezvikamu zviviri muzvitatu zvekugadzwa kwaitwa nechinangwa chekutsvagisa kana kukurukura chimwe chiitiko - chiratidzo chakajeka chekuti vatengi vari kuronga kumberi nechinangwa chekutanga bhizinesi uye ziso pana 2022 uye mberi.
Mune chimwe chiratidzo chekuvimba kwechikamu ichi, makambani anoratidza zviuru zviviri nemazana maviri nemakumi mashanu ane humbowo hwepasirese, anotora nyika dzinopfuura mazana maviri nevamiriri vanobva kuEurope, Latin America neAsia vakagara padivi peNorth America pauriri hweshow (ese 2,250 sq ft zvayo!) .
Wepa vanodzoka varatidziri, 16% vakaisa mari mukuvapo kukuru pashoo - vamwe, kusanganisira Baltimore, EventsAir, Boise uye St Louis, vakawedzera nzvimbo yavo yekumira ne100% kana kupfuura zvichienzaniswa neyakapfuura show muna 2019.
Kugamuchirwa kuIMEX America.
Gore rino shoo inotambira varatidziri vatsva kubva mhiri kwekuenda, mahotera uye tekinoroji zvikamu kubva kuA kusvika (anenge) Z anosanganisira: Amadeus River Cruises, Hopin, Louisiana, MeetingPlay, Minneapolis, Iberostar Hotel & Resorts uye VenuIQ. Iyo yakatsaurirwa Tech Nzvimbo yechiratidziro ndiyo yakakura kupfuura dzose, ichiratidza kukura kwechikamu chekuda, uye kudyara mu, chiitiko tekinoroji.
Carina Bauer, CEO weIMEX Group, anoti: "Takapedzisira kuita show makore maviri apfuura uye tinoparura nhasi nerunyorwa rwepasi rose rwevaratidziri nevatengi, pamusoro pezvidzidzo mazana maviri, pamwe nenzvimbo itsva. Kuti nditi ndakanakirwa handiti!
“Mushure memakore gumi Las Vegas yakaita seimba yechipiri, uye ndinoziva kuti ndiwo manzwiro achagoverwa nezviuru zvevanhu munharaunda yedu muno svondo rino. Kune avo vedu vanorarama nekufema misangano, zviitiko uye kurudziro yekufamba zvinoshamisa kuona indasitiri yedu ichidzoka muhupenyu.
"Nhamba, kugadzwa uye zvibvumirano zvebhizinesi parutivi, ndine chivimbo chekuti tichatarisa kumashure paiyo IMEX America edition iyi senzvimbo yekusimbisa indasitiri. Digital uye hybrid zviri pachena zvine nzvimbo yazvo, asi hapana chinokunda iyo visceral manzwiro ekuve pashow floor musangano vanobatana, vatengi nevatengesi vanobva kumativi ese epasi uye kuziva izvo zvinotungamira mukugadzirwa kwemabasa, budiriro yehunyanzvi, kusimukira kweindasitiri uye zvakanyanya kukosha pane zvese. , upfumi hwakanaka hunobatsira pasi rose.”
IMEX America inoenderera kusvika Mbudzi 11.